एक महिलाको नि*धन भयो, चितामा हाल्ने तयारी गर्दै गर्दा झस्किए मलामी ! – ताजा समाचार
एक महिलाको नि*धन भयो, चितामा हाल्ने तयारी गर्दै गर्दा झस्किए मलामी !
१० दिन अघि निधन भएकी एक महिलाले शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । गर्भ*वती आमाको नि*धन भएपछि उनको पेटमा भएको बच्चाको ख्याल आफन्तले गरेनन् । १० दिन अघि म*रेकी महिलालाई आफन्तहरुले अन्त्यष्टिको लागि लिएर गए ।
महिलाको श वलाई कफनले बेरिएको थियो । तर जव अन्त्यष्टिका लागि कफन खोले देख्नेहरु चकित भए । मृ त महिलासंग कफन भित्र एक नवजात शिशु पनि थिए । १० दिन अघि निधन भएकी महिलाले जिवित शिशुलाई जन्मदिएकी थिइन् ।
श वगृहका कर्मचारीहरुले मृ तक महिलाको श व राखिएको कफन खोल्दा नवजात शिशु देखेर झसँग भए । ३३ वर्षकी महिला ९ महिनाकी गर्भवती थिइन्, जतिबेला उनको निधन भयो । आमाको निधन भएपछि पेटको बच्चा पनि म’र्दछ भन्ने सबैको अनुमान थियो र उनको अन्त्येष्टिको तयारी गरियो र पार्थिव सरीर परिवारलाई सुम्पिइयो ।
महिलाको निधन भैसकेपछि उनको श वलाई श वगृहमा राखिएको बेला उनको पेटमा रहेको बच्चा कफिनभित्रै आफै जन्मिएछ । यद्यपि श वगृह भित्रको चिसोका कारण बालक धेरै समय बाँचेनछ र कफिन भित्र म’रेको रहेछ । एजेन्सी
यो पनि पढ्नुहोस : लिपिस्टिक यसरी लगाउँदा ओठ सुन्दर देखिन्छ
काठमाडौं । हरेक महिलाले लिपिस्टिक लगाउन रुचाउछन् । महिलाको सुन्दरता लिपिस्टिकमा विषेश फरकपना देख्न पाइन्छ । तर धेरैलाई लगाउने तरीका थाहा नहुन सक्छ । लिपिस्टिकलाई बोल्ड लुक्स दिन लिपिस्टिक लगाएपछि ओठको चारैतर्फ आउटलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि आइब्रो पेन्सिलको सहायता लिन सक्नुहुन्छ ।
लिपिस्टिक लगाउनुपूर्व फाउन्डेसन प्रयोग गरेमा लिपिस्टिक ओठभन्दा बाहिर जान सक्दैन । तपाईलाई मन पर्ने रंगको लिपिस्टिक ब्रसका माध्यमले ओठमा लगाउनुस् । त्यसपछि ब्लान्टिङका लागि टिस्यु पेपरको प्रयोग गर्नुस् ।